Nge-Juni 2018-IiRadiyo zeeNethiwekhi
Ikhaya / 2018 / Isilimela
ezaposwa ngomhla Juni 12, 2018 Juni 12, 2018
Kwiminyaka eyadlulayo, xa ndandiqala ukumamela amaqela e-Amateur, ukusebenza kwakulungile.
Iifowuni zanikwa ngokucacileyo, iingcaciso zanikwa ekugqibeleni koqhakamshelwano malunga neenjongo zalowo ufowunayo, (nokuba kungokubeka iliso, ukuvala, ukutshintsha rhoqo okanye nantoni na). Babeluncedo "kwizikhombisi" kwinto eyayisenzeka ngokulandelayo kunxibelelwano kwaye ngakumbi ilungele abaphulaphuli abanjengam.
Nangona kunjalo, bekusoloko kukho i "maverick" ezimbalwa. Rhoqo aba bantu babedla ngokuquqa baphinda abaphindayo kwaye babasebenzisele ezabo iinjongo, ezithi "zincinci".
Kwakungeyonto ingaqhelekanga ukuva umculo udlala, amazwi angaqhelekanga "ancwinayo" kwaye ngamanye amaxesha ayinto ecekisekayo. Yayingelohlobo lwento onokufuna ukuba abantwana bakho okanye abazukulwana bakho bayive. Ayenzanga lukhulu ukubhengeza into oyithandayo!
Ngoba? Ngoba? Ngoba?
Singaqikelela ngonaphakade ngokubhekisele kwiinjongo zabantu abanjalo kwaye, eneneni, kunokubakho nemicimbi ethile yengqondo ebandakanyekileyo kumxube.
Kodwa inyani iya kuhlala kukuba iiBhendi zeAmateur zazingekho (kwaye ndiyacinga ukuba ndicebisa, nanamhlanje, azikabi) indawo onokuvumela abantwana ukuba bazulazule bakhululeke.
Sikhala ngenxa yokunqongophala kwemisebenzi kwii-Amateur band (ngaphandle kokhuphiswano, kodwa leyo yinto yesifundo esithi "Marmite" endiya kuyiphepha okwangoku) kodwa, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, liphume ezandleni zethu.
Uhlobo lokuziphatha esinganqweneli ukuva ukuba luxhaphake, ngelishwa lukhona- kwaye kubonakala ngathi akukho nto sinokuyenza ngayo.
Nokuba ngaba ngabona “badumileyo” abahlali be-14MHz okanye izidenge zasekhaya kwiimitha ezi-2, amagunya ethu elayisensi abonakala engenamandla, okanye engenakho, okanye mhlawumbi engenalo ixesha kunye nezixhobo, zokuba amapolisa asebenze ngokufanelekileyo.
Ixesha yayikukuba kungathathi hamba kakhulu ngaphandle kwemigaqo yelayisensi yakho onokuthi ulindele utyelelo olukhawulezileyo nolungqalileyo oluvela kumaGosa avela kwi-GPO (e-UK) - iilayisensi ezininzi bezisesichengeni sokurhoxiswa kwaye izixhobo ezininzi zithinjiwe.
Akukho kubonakala ngathi. Singaba nelayisensi "yasimahla" ngokwezezimali, kodwa ke oko kuza kuncinci xa kuthethwa ngendlela ezilawulwa ngayo iiBhendi zethu ze-Amateur.
Ngenisa iTekhnoloji yeDijithali
Kwinkulungwane yama-21 nangona kunjalo, sinobuchwepheshe bedijithali obusivumela ukuba silawule “imihlaba yethu ekwi-intanethi” ngokukuko.
Kwaye le yenye yeenethiwekhi zeeRadiyo apho ndingathanda ukutsala umdla wakho namhlanje.
I-Zello sisixhobo esithandwayo se-PTT esisetyenziswa zezi zixhobo- zininzi izizathu ezilungileyo zokuba kutheni, kodwa phakathi kwazo kukukwazi ukugcina indlela abantu abafikelela ngayo, bejonga.
Eyakhelwe kwiZello zilawulwa ukunceda abaququzeleli betshaneli kunye "neemodareyitha" ukugcina ikona yakho yehlabathi ledijithali isebenza kakuhle.
Umzekelo, masithi wenza igqiza leklabhu yerediyo yasekhaya. Ungayikhusela ngephasiwedi "njengomgaqo wokuqala" - ngamalungu akho kuphela aya kuyazi igama eligqithisiweyo kwaye kuphela abanokufikelela kulo. Ukuthi ga, kuhle!
Emva koko unokukhetha ukuba nawaphi na amalungu amatsha, angene kwi-password echanekileyo, kufuneka "athenjwe". Oku kuthetha ukuba wonke umntu kufuneka alinde ukutsho kwemodareyitha ukubavumela ukufikelela ngokupheleleyo kweso sitishi.
Kodwa akuphelelanga apho!
Nje ukuba uthembeke, "unokuthuliswa" (akukho malungelo okuhambisa- mamela kuphela kuvunyelwe), uvaliwe (ngalo naliphi na ixesha lexesha) okanye ukhatywe ngokukhawuleza!
Ngaba uyabona ukuba ndiyaphi nale?
Ukuba oku bekunokwenzeka kumaBhendi kaHam kunye nabaphindayo kwixa elidlulileyo, uninzi lwabasebenzi abahlwempuzekileyo kunye nokuziphatha bekungayi kubakho ndawo.
Kodwa oko akukho lula kwilizwe le-analogue. Kwilizwe ledijithali nangona kunjalo, kulula ukulisebenzisa!
Makhe ndikunike omnye umzekelo - "Iiradiyo zenethiwekhi" Iitshaneli zeZello zibonakalisa ukuthandwa kakhulu ngalo mzuzu, ngakumbi apha e-UK. Ewe bayakhula kubonakala ngathi yimini!
Enkosi kwiqela elizinikeleyo leemodareyitha (ezibonakala ngathi ziyakhula emini, ngendlela!) Abafikayo ngokulula "badliwanondlebe" malunga nomdla wabo onokubakho ikakhulu kwisitishi esisekwe ikakhulu nguHam.
Ubulungu buxubene kakhulu nabantu abafunyenwe benamalungelo okufundela kunye noonomathotholo ongenawo amaphepha-mvume (okanye “iPTT”), kodwa kukho imithetho engqongqo malunga nokuziphatha, isimilo esilindelweyo kunye nokulindelweyo.
Kanye okanye kabini, abantu baligqithile uphawu kwaye basuswe ngokulula kwisitishi, balumkiswa kwaye ngamanye amaxesha banikwa ithuba lesibini lokuphucula indlela abaziphethe ngayo. (Ngamanye amaxesha akunjalo, kuxhomekeke kubuzaza bento eyenzekileyo…)
Kungenxa yokuba uZello angakwazi ukurekhoda zonke ii-overs (ukuba uzixela!), Kulungile ngqo ukuba iimodareyitha zimamele eyona nto ithethwayo kwaye ziyisebenzise njengomthombo ophambili wobungqina kwiimeko zempikiswano.
Ngamanye amagama, akukho mfuneko incinci yobungqina bemeko esekwe kwinto ethile cinga omnye umntu wathi okanye wayethetha. Nokuba iimodareyitha ziyaliphosa ixesha elonileyo ngobuqu, banokuphindaphinda, ngokungathi bebephila!
Uvuyo kwihlabathi (ledijithali)
Ezi ke zezinye ze "uyolo" lokumodareyitha- "uvuyo" lwehlabathi ledijithali.
Kwakhona, kwaye ndiyaxolisa ngokuqhubeka malunga noku, kodwa itekhnoloji isiphosele i-conundrum. Ukuba siyaqhubeka nokuzama ukuphila kuphela Kwilizwe le-analogue, uvuyo lokumodareyitha aluyi kubakho ngokubanzi kuthi. Nangona kunjalo, ukuba samkela eyiphi idijithali entsha Itekhnoloji inokusenzela yona, sinokuyiphucula kakhulu imeko yethu.
Ayikokuzibaxa kakhulu ukucebisa ukuba singaba, kweli hlabathi litsha ledijithali, amapolisa ethu kwaye ngenene negunya lethu lokufumana ilayisensi- eneneni, sele siyenzile!
Mhlawumbi igama lokugqibela kufuneka liye kwilungu leNethiwekhi yeeRadiyo, othumele ngokwakhe kule veki kuphela kwiQela likaFacebook eliqhotyoshelwe kumajelo, alandelayo…
"Ndifuna nje ukubulela kuzo zombini iimods kunye nabasebenzisi endiva kubo yonke imihla ngokwenza kunye nokugcina indawo exakekileyo, enomdla, ubukhulu becala itekhnoloji / unomathotholo indawo endinokuthi ekugqibeleni ndingene kuyo kwaye ndimamele kwakhona emotweni nasekhaya xa usapho imalunga ne.
Oyena mncinci wam (9) ukwirediyo. Inomathotholo wayo we-PMR (iseti yabucala ukuze indive kuphela), isebenzisa uZello kwisitishi sethu sabucala kwaye ifuna ukwenza uvavanyo lwesiseko!
Siphume ngaphandle kwaye sithathe oonomathotholo kunye nathi naphi na apho sihamba khona, kodwa incoko yalapha ijikeleze kakubi ngolwimi olunemibala, kufutshane-ne-i-knuckle innuendo / smut kunye nezopolitiko ezingcoliswe ngoxinzelelo endingasaziva Ndiqinisekile ngokuvula i-FT-70, ngaphandle kokuba kuqhutywa esikolweni kusasa xa sele ifile.
Ndibeke ndawonye i-hotspot ephathekayo ene-DV4 Mini kunye ne-Raspberry Pi 3 ukuya kwi-CQ-UK ebhetele ngokungapheliyo kwaye iyinyani kumoya werediyo-ithule cwaka ngamanye amaxesha. Ndihlala ndilwenza lonke uhambo lwam lokuya ngaphandle kokuva umnxeba omnye.
Ndidubula iZello kunye neeRadiyo zoNxibelelwano emotweni nasekhaya, ndiyazi ukuba sizokuva ingxoxo efanelekileyo, ecocekileyo nenentlonipho- yiyo le nto bendisoloko ndikholelwa ekubeni ndinguRadio Amateur - kwaye mna 100% ndiyazi Andizukuva izinto endizivayo kwinqanaba le-CB njengangoku elivelisayo kwiimitha ezi-2 apha malunga nesigwebo sabo esinye, bexoxa, befunga kwaye besoyikisa ukunika umntu 'utyelelo'.
Ndilinde i-T-320 yam ukuba ifike… I-FT-70 iza… iza kuza nam xa ndiphuma endlini, kodwa ndiyathemba ukuba izakuqala uhambo ebhegini xa abantwana bekhona.
Ngamafutshane - sivuyiswa kukwenza indawo ethile kuyonwabisa ukuba yinxalenye yayo, uyolo ukumamela kunye nendawo endaziyo ukuba ayizukuyikhupha ngokupheleleyo intombi yam kwizinto endizithandayo, kodwa iya kumkhuthaza ukuba aye kwisiseko sakhe (ilayisensi ).
Ngumphefumlo womoya omtsha kwaye ungade uqhubeke. ”
Kulungile, Mhlekazi! Kude kube njalo zonke qhubeka unandipha "uvuyo lokumodareyitha"!
ezaposwa ngomhla Juni 8, 2018 Juni 8, 2018
Unokuphumelela iTransceiver yeSimahla!